सिंगापुरमा विश्व भ्रमण गर्न उत्तम पासपोर्ट छ यात्रा समाचार
सिंगापुरसँग विश्व भ्रमण गर्न उत्तम पासपोर्ट छ
मरियम | | सि .्गापुर, यात्रा
छवि | AsiaOne
विदेशमा छुट्टी मनाउने क्रममा यात्रुहरूको चिन्ताको विषय भनेको के हो भने के उनीहरूलाई केही देशहरूमा प्रवेश दिन भिसा चाहिन्छ वा यस अवस्थामा कसरी प्राप्त गर्ने। राहदानी हुनु जहिले पनि ग्यारेन्टी हुँदैन कि हामी अर्को देशमा पैदल यात्रा गर्न सक्दछौं किनभने यो एक गन्तब्यको उत्पत्तिमा भएको धेरैको दुईवटा सम्झौताहरूमा निर्भर गर्दछ। यस तरिकाले, केही राहदानीहरू अरूलाई भन्दा संसारलाई राम्रोसँग हेर्न सकिन्छ किनभने यससँगै, एयरपोर्ट सुरक्षा नियन्त्रण वा अध्यागमन विन्डोजमा अधिक ढोका खोलिन्छ।
वैश्विक वित्तीय सल्लाहकार आर्टन क्यापिटल (जुन निवास र नागरिकता अनुमति प्राप्त गर्न चाहने मानिसहरूलाई सल्लाह दिने जिम्मामा छ) द्वारा बनाईएको राहदानी सूचकांकको अपडेट अनुसार। सिंगापुरको राहदानी विश्वमा सब भन्दा शक्तिशाली छ जब यो यात्राको लागि आउँदछ थप कागजको काम बिना। श्रेणीले यसको वर्गीकरण ग्रहमा देशहरूको संख्याको आधारमा गर्दछ जुन यात्री भिसा बिना भेट्न सक्ने छन्।
पराग्वेले एसियाली देशका बासिन्दाहरूलाई अहिलेसम्म प्रतिबन्ध लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेपछि सिंगापुरले सूचीमा ठाउँ ओगटे। परिमार्जन पछि, तिनीहरू अब भिसा बिना १ 159 countries देशहरू पहुँच गर्न सक्दछन्। तर कुन अरू देशहरूले क्रमबद्धतामा शीर्ष स्थानहरू पूरा गर्छन्?
1 राहदानी भनेको के हो र यो केको लागि हो?
2 सूची कसरी बनेको छ?
3 कुन मापदण्डले राहदानीलाई राम्रो वा खराब बनाउँछ?
4 के यो राहदानी किन्न सम्भव छ?
5 पासपोर्टको बारेमा जिज्ञासा
5.1 राहदानी कसले आविष्कार गरे?
5.2 राहदानीको आकार कति छ?
5.3 जालसाजीहरूबाट बच्नका लागि चित्रहरू
5.4 यात्राका लागि उत्तम र सबैभन्दा खराब पासपोर्टहरू
राहदानी भनेको के हो र यो केको लागि हो?
यो एक आधिकारिक कागजात हो जुन एक निश्चित देश द्वारा जारी गरिएको हो तर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको साथ। यसको नोटबुकको रूप विगतको समयबाट लिइएको हो जहाँ परमिटहरू हातले लेखिएको थियो। वर्तमानमा, प्राविधिक अन्तरालका कारण, पुस्तकको रूपमा पासपोर्ट सबैभन्दा उपयोगी प्रणालीको रूपमा जारी रहन्छ, उनीहरूसँग पढ्न सजिलो चिप जतिसुकै भए पनि। सामान्य सर्तहरूमा यसले प्रमाणित गर्छ कि जसले यो बोक्छ उसले देश प्रविष्ट गर्न सक्छ र छोड्न सक्छ किनकि किनकि तिनीहरू त्यसो गर्न अधिकृत छन् वा प्रतीकको रूपमा कि उनीहरूको देशले त्यो राज्यलाई मान्यता दिएको छ।
सूची कसरी बनेको छ?
सूचि बनाउनका लागि संयुक्त राष्ट्र संघका १ 193 member सदस्य देशहरुका साथै ह Hongक Kong, प्यालेस्टाइन, भ्याटिकन, मकाओ र ताइवानलाई पनि ध्यानमा राखिएको छ।
सिंगापुर पासपोर्ट पहिलो पटक हो कि यो सूचीमा शीर्ष स्थानमा छ र यो एशियाली देशले पहिलो पटक प्राप्त गरेको हो। उनीहरूले केहि दशकहरुदेखि स्वतन्त्र छन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै श the्गन क्षेत्र बनाउने देशहरु जस्तो यो सिंगापुर मात्र हो जसले समूहमा निर्भर बिना केही निर्णय गर्दछ।
सिंगापुर आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई देशहरूको संघ) मा संलग्न हुन सक्दछ तर तिनीहरू यसबाट टाढा रहन रुचाउँछन्।
यी देशहरू हुन् जुनसँग पासपोर्ट तपाईंसँग विदेशमा यात्रा गर्नको लागि उत्तम सुविधाहरू छन्:
स्वीडेन र दक्षिण कोरिया १ 157
डेनमार्क, इटाली, जापान, स्पेन, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, युनाइटेड किंगडम र नर्वे १156
लक्जमबर्ग, पोर्तुगाल, बेल्जियम, हल्याण्ड, स्विजरल्याण्ड र अष्ट्रिया १ 155
संयुक्त राज्य, आयरल्याण्ड, मलेशिया र क्यानडा १154
न्यूजील्याण्ड, अष्ट्रेलिया र ग्रीस १153
आइसल्याण्ड, माल्टा र चेक गणतन्त्र १152२
लाट्भिया, पोल्याण्ड, लिथुआनिया, स्लोभेनिया र स्लोभाकिया १149।
कुन मापदण्डले राहदानीलाई राम्रो वा खराब बनाउँछ?
लन्डन परामर्श हेन्ले एण्ड पार्टनर्सका अनुसार भिसा छुट पाउने देशको क्षमता अन्य देशहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्धको झलक हो। त्यस्तै, भिसा आवश्यकताहरू पनि भिसा प्राप्ति, भिसा जोखिम, सुरक्षा जोखिम, र अध्यागमन नियमहरूको उल्ल .्घनद्वारा निर्धारित गरिन्छ।
के यो राहदानी किन्न सम्भव छ?
यदि सम्भव छ भने। सूची तयार गरेको कम्पनीले दोस्रो, अधिक लाभदायक राहदानी चाहनेहरूलाई ढोका खोल्न ढोका खोल्न मद्दत गर्दछ जहाँ लगानीमार्फत राहदानी लिन सकिन्छ। अवश्य पनि, लगानी गर्नुपर्ने रकम २ र १ million मिलियन डलर भन्दा कम हुँदैन।
सामान्यतया, राम्रो राहदानीको खोजीमा रहेका अन्य देशका मानिसहरू मध्यपूर्व, चीन वा रुस जस्ता भिसा लिन आउँदा प्रतिबन्धात्मक स्थानहरूबाट आएका हुन्छन्।
पासपोर्टको बारेमा जिज्ञासा
राहदानी कसले आविष्कार गरे?
बाइबलमा त्यस्ता लेखहरू छन् जुन कागजातको बारेमा बोलेका थिए जसले यसका वाहकलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान अधिकार पुर्‍यायो तर यो मध्यकालीन युरोपमा थियो जहाँ त्यस ठाउँका अधिकारीहरूद्वारा जारी गरिएका कागजातहरू देखा पर्न थाले जुन शहरहरूमा प्रवेश गर्न सक्थे र निश्चित रूपमा। एक्सेसहरू।
यद्यपि, पासपोर्टको आविष्कार एक सीमा पारिको पहिचान कागजातको रूपमा इ England्ल्यान्डको हेनरी V लाई क्रेडिट हुन्छ।
राहदानीको आकार कति छ?
लगभग सबै पासपोर्टहरू १२ 125 × mm× मिमी आकारको हुन्छन् र प्राय: approximately२ पृष्ठहरू हुन्छन्।e, लगभग २ pages पृष्ठ भिसाका लागि समर्पण गर्छ र यदि कागज सकियो भने नयाँ अनुरोध गर्नु आवश्यक छ।
जालसाजीहरूबाट बच्नका लागि चित्रहरू
नक्कल गर्नबाट बच्न, राहदानी पृष्ठ र मसीको रेखाचित्र जटिल छ। उदाहरण को लागी, स्पेनिश पासपोर्ट को मामला मा, पछाडिको आवरण कोलम्बस को अमेरिका पहिलो यात्रा देखाउँदछ, जबकि पृथ्वी मा सबैभन्दा प्रभावशाली पशु प्रवासन भिसा पृष्ठहरु मा देखा पर्दछ। यदि हामी निकारागुआको बारेमा कुरा गर्छौं भने, तपाईंको पासपोर्टमा of different किसिमका सुरक्षा प्रकारहरू छन् जुन यसलाई बनाउन धेरै गाह्रो हुन्छ।
यात्राका लागि उत्तम र सबैभन्दा खराब पासपोर्टहरू
केहि देशहरू जस्तै जर्मनी, स्विडेन, स्पेन, ब्रिटेन वा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग धेरै राम्रा पासपोर्टहरू छन् उनीहरूले १ 150० भन्दा बढी राज्यहरू पहुँच गर्न सक्दछन्। यसको विपरित, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, सिरिया, लिबिया, सुडान वा सोमालिया जस्ता देशहरूमा कम यात्री पासपोर्ट छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » एशिया यात्रा » सि .्गापुर » सिंगापुरसँग विश्व भ्रमण गर्न उत्तम पासपोर्ट छ
भेनिसको s सेस्टेरि जुन तपाईंलाई आफ्नो यात्रामा थाहा हुनुपर्दछ